‘भैरे’ दयाहाङ राई टाइपको फिल्म ! « Ramailo छ
‘भैरे’ दयाहाङ राई टाइपको फिल्म !
भर्सटायल एक्टर हुन, दयाहाङ राई । ’लुट’ फिल्ममा ’गोफ्ले’ को भूमिका निभाएपछि एकाएक चम्किएका उनी अहिलेपनि उत्तिकै व्यस्त छन् । दयाले फिल्मबाट महंगो पारिश्रमिक पनि लिदैं आएका छन् ।
गएको वर्ष महिनैपिच्छे नयाँ फिल्म लिएर हल छिरेका उनी यस वर्षका लागि दर्शकलाई फिल्म ‘भैरे’ पहिलो कोशेसी स्वरुप दिँदैछन् । जुन साउन ४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ, यसमा उनको शिर्ष भूमिका छ । एभरेष्ट सूर्य बोहरा निर्देशित ‘भैरे’ मा दयाहाङ राई भिन्न क्यारेक्टरमा प्रस्तुत भएका बताउँछन् । ’लुट’ को गोफ्ले झै ‘भैरे’ ले पनि आफुलाई नयाँ परिचय दिनेमा उनी विश्वस्त छन् । उनी भन्छन्, ‘भैरे को कथा मन र्पयो अनि छाड्न सकिन । यो मेरो टाइपको फिल्म बनेको छ ।’
‘भैरे’ सामाजिक विषय वस्तुमा बनेको फिल्म हो । पहिलादेखि जसरी फिल्महरु बनिरहेका थिए त्यसैको एक अवधारण हो । यो कुनै ठाउँ विशेषको कथा हो भन्ने छैन । नेपालभरीको एक प्रतिनिधि गाउँमा सुटिङ गरिएको छ, जुन मुस्ताङ र अपर मुस्ताङमा खिचिएको छ’, फिल्मबारे उनले भने । उनी ‘भैरे’ लाई पूर्ण कमर्सियल फिल्म भन्न चाहन्छन् । दर्शकलाई सोच्न विवश नबनाएपनि यस फिल्मले मनोरञ्जनको खुराक दिन नचुक्ने उनको दाबी छ । सान्नानीलाई भेट्न आउँदा :
भैरे’ तपाईको करिअरको फरक फिल्म हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ’त्यो त भन्दिनँ तर मेकिङको हिसाबबाट भने फरक भन्न सक्छु’ । निर्देशक एभरेष्ट सूर्य बोहरा ’मेन स्ट्रिम स्कूलिङ’ बाट आउन’ भएको हो । उहाँले फिल्ममा त्यही स्कूलिङ फलो गर्नु भएको छ । उनलाई फिल्मले राम्रो नतिजा ल्याउनेमा शंका छैन रे । यसमा दयाहाङको जोडीको रुपमा नायिका सुरक्षा पन्त प्रस्तुत भएकी छन् । ’सान्नानीलाई भेट्न आउँदा’ र ’सनम माया ला’को’ गीतले फिल्मलाई दर्शकले रुचाइरहेका छन् भने फिल्मको प्रोमो केही साता अघि मात्रै रिलिज गरिएको छ । भैरे शिर्ष गीत :
भैरे मा दया र सुरक्षा सँगै नायिका बर्षा सिवाकोटी, नायक विक्रान्त बस्नेत, कलाकार बुद्धि तामांग, बाल कलाकार अनुभव रेग्मी लगायतको अभिनय रहेको छ ।